Caamsaa 09, 2017
Imaanu’eel Maakroon filannoo prezidaantummaa Ferensaay injifachuu jechuun biyyattiin miseensa ijoo gamtaa Awrooppaa taate siyaasa sabboontotaa kanneen farra gamtichaa ta’anii ammaaf akka of irraa ittistu taaise jechuu dha. Prezidaanticha haaraa filatame ilaalchisuun biyyoota adda addaa irraa yaadi kennamaa jira. Kan deggeraa gamtaa Awrooppaa ta’an Markoon Ferensaay gamticha keessaa baasuuf dhaadataa ka turan Marine Le Pen-n injifatan.
Immaanu’eel Maakroon erga Napoleon Bonaparte qabee prezidaantii ga’eessa Ferensaayiin hoogganuuf filatame.
Macron badhaadhinni hundumaaf akka ta’u waadaa seenan. Biyyattiin kanneen biyya ofii qofaaf baabsanii fi addunyaa ka biroo waliin hariiroo uummatanii jiraachuu fedhan giddutti addaan qoodamtee jirtu kana tokkoomsuutu irraa eegama.
Chaansilerittiin Jarmanii Angela Merkel bilbiluu dhaan makrooniin baga gammaddan jedhan.
Emmanue Macron lammiiwwan Ferensaay miliyoonaan laka’amaniif akkasumas hedduu kanneen Jarmanii keessaaf fi guutummaa Awrooppaa keessaaf nama abdii of harkaa qabani. Duula nama jajjabeessu kan gamtaa Awrooppaa deggeru geggeessan. Addunyaaf banaa ta’uun akka nama irra jiru nama amanani. Gabaa hawaasaa fi misoomaaf illee nama ciminaan dhaabatani jedhan Merkel.
Magaalaa galma mootummaa Estooniyaa Taaliitti kanneen wal ga’an hoogganoonni biyyoota Baaltiikii fi HOolaansis injifachuu Macroon gammachuun simatan.
Xayyaarri Nam-maleeyyii Dahata IS Haleele
Ijoolleen Sudaan Kibbaa Balaaf Saaxilaman: Angawoota Tokkummaa Mootummootaa
Dho’iinsi Hamaan Moqaadishoo Keessaa Namoota Ja’a Galaafate
Baaraak Obaamaan Dhaabbata John F Kennedy Biraa Badhaasa Argatan